2. မွပေဒသောကြှနျး သမိုငျးအစ - ခရမျးကြျောနိုငျဦး
... ငလျင်ကြီးများ နှင့် ကျော်ဇော ထင်ရှားသည့် မော်ဓောရှင်ဘုရား - မောင်မောင်စောဦး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့ မြို့လယ်မဟာမုနိဘုရားကြီးသမိုင်း မံဘုရား - ဒေါက်တာသန်းထွန်း နှစ်ကျပ်ခွဲရွာမှ ထူးဆန်းစွာ ...
4. မွို့တျောရနျကုနျ သိမျကွီးစြေး - လငျးယုနျသဈလှငျ
5. သမိုငျးဝငျ မိုးဗွဲမှတေျောဓာတျစဈ ဘုရားသမိုငျး
... နမ့်ခမ်းမြို့ မြို့လယ်မဟာမုနိဘုရားကြီးသမိုင်း မံဘုရား - ဒေါက်တာသန်းထွန်း နှစ်ကျပ်ခွဲရွာမှ ထူးဆန်းစွာ လှုပ်သောဘုရား - ကျော်မြတ်လင်း မြန်မာပြည်မြောက်ဖျားပိုင်းမှ ကောင်းမူးလုန်စေတီ - ရာမညကိုကိုနိုင် ...
6. ရနျကုနျဆေးရုံကွီးသမိုငျး - မွငျ့ဆှေ
... လျှောက်ကြည့်ခြင်း - မြသန်းတင့် ရန်ကုန်ဆူးလေဘုရားပြတိုက် ကြေးရုပ်ငယ် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ...
7. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(10), Epiloge, Glossary and Index By Dr.Than Tun
eBook file size: 9.13 MB ebook pages: 175 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1990. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
8. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(9), AD 1853-1885 By Dr.Than Tun
eBook file size: 18.8 MB ebook pages: 366 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1989. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
9. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(8), AD 1819-1853 By Dr.Than Tun
eBook file size: 5.82 MB ebook pages: 330 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 191988. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
10. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(7), AD 1811-1819 By Dr.Than Tun
eBook file size: 70.2 MB ebook pages: 524 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1988. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
11. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(6), AD 1807-1810 By Dr.Than Tun
eBook file size: 112 MB ebook pages: 873 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1987. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
12. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(5), AD 1788-1806 By Dr Than Tun
eBook file size: 120 MB ebook pages: 1091 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
13. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(4), AD 1782-1787 By Dr Than Tun
eBook file size: 5.75 MB ebook pages: 794 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
14. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(3), AD 1751-1781 By Dr Than Tun
eBook file size: 980 KB ebook pages: 324 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1985. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
15. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part(2), AD 1649-1750 By Dr Than Tun
eBook file size: 1.07 MB ebook pages: 371 Publication: Kyoto, The Center of Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1985. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
16. The Royal Orders Of Burma, AD 1598-1885, Part (1), 1598-1648 By Dr Than Tun
eBook file size: 1.32 MB ebook pages: 492 Publication: Kyoto, The Center For Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1983. Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than ...
17. ရွှေကျင်နိကာယသမိုင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun ရွှေကျင် ...
18. ပျူအရင် နှစ်ပေါင်း ၂၃၀၀ က ၁၂၀၀ ထိ - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
eBook file size: 804 KB ebook pages:9Publication: 2004 June လထုတ် မြန်မာ့သမိုင်းပုံစာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ချက်။ Download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun ...
19. မှန်ကူကွက်ပုံသဏ္ဌာန် ရှေးမြို့ဟောင်းများ - အောင်မြင့်
eBook file size: 1.18 MB ebook pages: 24 Publication: ၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏(၇၅)နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသော ရှာရှာဖွေဖွေ သမိုင်း စာအုပ်ထဲမှ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခန်းကဏ္ဍထဲ၌ ...
20. မြန်မာနိုင်ငံ၏လူမျိုးများ (၁၁-၁၃ ရာစုနှစ်) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးများ (၁၁-၁၃ ရာစုနှစ်)အခန်းကို ထုတ်နုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ download -Related Articles- ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun ...